Ividiyo-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Inqubo Yokukhiqiza ye-oda le-Brewery
Ukukhiqizwa kwe-COFF kulawulwa ngokuqinile ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi. Ikhwalithi, ukukhiqiza, kanye nokuvumelana nezimo yizinto ezibalulekile ze-COFF. Ngenxa yezinqubo zayo zokukhiqiza ezihlangene zibheka kusuka ekuthengeni izinto, ukuwelda, ukupholisha, ukuhlangana kuya ekupakisheni, sinikezela ngensizakalo yokukhiqiza eyenziwe kusuka kumqondo wokuklama kuya ekukhiqizeni okungabizi kakhulu.
Ukuthunyelwa kwemikhumbi engu-10000L iya e-Australia
Ithangi lamanzi elishisayo elingu-10,000L, ithangi liketshezi elibandayo elingu-10,000L, imikhumbi yokubilisa engu-10BBL ilayisha esitsheni. Siyazikhathalela ngayo yonke imininingwane ukuvikela imishini ekulimaleni kwezokuthutha.
I-oda Lemikhumbi Yokuvutshelwa Namathangi Agqamile Silungile
I-Coff Inspires Brewers Okungenzeka
Kungani ukhawulela amandla okuphuza kwakho ngemishini engahluziwe nengasebenzi kahle? Ngabe imishini ye-premium ibiza kakhulu? ICoff ingaletha indawo ophisa kuyo utshwala ngokusebenza okuphezulu, imikhumbi yokubiza engabizi kakhulu eyenziwe ngokuphelele kusuka ku-SS304 ekhethiwe, sebenzisa izinto ezihlanzeke kakhulu futhi ekugcineni okuhle kakhulu ukwenza ngcono ukusebenza kwakho.
I-Coff First Brewing Stout neCofi Flavour
Lokhu ukuzama kwethu ukwenza ikhofi lomhlabathi, ubhiya omnyama obhangqwe nekhofi elimnyama. Sifaka ikhofi ngesikhathi sesifiso sokubilisa ukufeza ukunambitheka okuqinile, noma ingahle ibe nephunga lepelepele eluhlaza.
Inqubo Yokwenza Ubhiya Ngezinsiza Ze-Coff
Amavidiyo avela kumakhasimende ethu. Basitshele ukuthi imikhumbi yeCoff iyabakhulula ekususeni okusindayo kokulawula yonke into yokupheka, manje sebengakwazi ukunaka kakhulu ukwakha udumo lwabo kuma-flavour aqinile.